Midowga Afrika oo guddi u magacaabay colaada ka aloosan Itoobiya – Soomaali 24 Media Network
Midowga Afrika oo guddi u magacaabay colaada ka aloosan Itoobiya
Posted on November 21, 2020 Leave a Comment on Midowga Afrika oo guddi u magacaabay colaada ka aloosan Itoobiya
Madaxweynaha koonfur Afrika Cyril Ramaphosa oo haatan ah hoggaamiyaha ururka Midowga Afrika ayaa seddax xubnood u magacaabay in ay wadahadal u furaan dowladda federaalka Itoobiya iyo is-maamulka Tigay-ga.
Xubnaha la magacaabay ayaa kala ah Ellen Johnson-Sirleaf oo madaxweyne ka soo noqotay dalka Liberia, Joaquim Chissano oo isna madaxweyne ka soo noqday dalka Mozambique iyo Kgalema Motlanthe, Madaxweynahii hore ee South Africa.
Shaqda ugu horeysa ee guddigaas, ayaa ah in dhamaan dhinacyada is-haya ay qeyb ka noqdaan aragtida dhameynta khilaafka lana abuuro jawi wadahadal qaran oo loo dhan yahay si loo xalliyo dhamaan arrimaha keenay isku dhaca, iyo soo celinta nabadda iyo xasiloonida Itoobiya.
Arintan ayaa timi kadib markii madaxweynaha itoobiya haweeneyda lagu magacaabo Sahle-Work Zewde ay booqatay koonfur afrika, halkaasi oo ay wada hadal kula yeelatay madaxweyne Cyril Ramaphosa.
← Beesha Caalamka oo doorashadii HirShabelle ka soo saartay war ka duwan kii Cali Guudlaawe
Shir maanta Muqdisho uga furmaya musharaxiinta mucaaradka ah →